६ वर्ष पुरानो बर्गरको लिलामी, यति धेरै रकम आएपछि मालिक दङ्ग, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
६ वर्ष पुरानो बर्गरको लिलामी, यति धेरै रकम आएपछि मालिक दङ्ग
एजेन्सी। कुनै पुरानो सामानहरु यस्तो हुन्छ कि जसको मूल्य निकै नै धेरै हुन्छ र आजको जमानामा त्यस्तो पुरानो सामानहरु कमै पाइन्छ। जसले गर्दा त्यस्ता सामानलाई लिलामी गरिन्छ वा म्यूजियमतिर राखिन्छ। तर के तपाईले कहिल्यै खानेकुरा लिलामी भएको सुन्नु भएको छ ? त्यही पनि ६ वर्ष पुरानो।
छैन भने आज हामी तपाईलाई त्यसै विषयमा जानकारी गराउँदै छौ कि जुन सुनेर तपाईहरु छक्क पर्न सक्नुहुन्छ। यो घटना क्यानडाको ओन्टारियोमा घटेको हो। जुन केही समय अघिको हो।
ओन्टारियोमा बसोबास गर्ने डेव एलेक्जेन्डर नामक एक व्यक्तिले करीब ६ वर्ष पुरानो चिजबर्गर लिलामी गरेका हुन्। मिडिया रिपोर्टका अनुसार डेवले एक बर्गर र केही तारेको आलु घरमा सम्हालेर राखेका थिए। जसलाई उनले बेच्नका लागि अनलाइन सपिङ साइट ईबे मा विज्ञापन राखे।
त्यसपछि हैरान बनाउने कुरा के भयो भने ६ वर्ष पुरानो चिजबर्गर किन्नको लागि डेवलाई धेरै फोनहरु आउन थाल्यो। यो देखेर उनी पनि दङ्ग परे। उनले सुरुमा उक्त बर्गरको लिलामी रकम ३० डलर राखेका थिए। तर पछि गएर त्यो बर्गरको मूल्य ६२.६५ पुग्न गयो। जसका कारण डेव निकै खुशी भए।
डेवका अनुसार उनले त्यो चिजबर्गर सन् २०१२ को ६ जुनमा किनेर घरमा ल्याएर राखेका थिए। ओन्टारियोमा बसोबास गर्ने मानिसहरुका अनुसार म्याकडोनाल्ड्सको फुड कहिल्यै बिग्रिदैन। जसअनुसार डेवले पनि ६ वर्षसम्म बर्गरलाई सम्हालेर राखे र पछि लिलामी गरे।